Muuri News Network » Fanaaniintii Xidigaha ee Muqdisho Bandhig Faneedka ku qabtay oo la xiray
Fanaaniintii Xidigaha ee Muqdisho Bandhig Faneedka ku qabtay oo la xiray
Wararka ka imaanaya magaalada Hargeysa ayaa sheegaya in ciidamada Booliska Somaliland ay xabsiga dhigeen qaar ka mid ah Fanaaniintii Xidigaha Geeska ee habeenkii Ciida ku qabtay magaalada Muqdisho Bandhig Faneed.
Fanaaniinta la xiray ayaa kala ah Nimcaan Hilaac, Maxamed Axmed Bakaal Cirro, C/raxmaan Oday iyo Xamda Queen oo saaka ka ambabaxay magaalada Muqdisho ayaa markii ay ka dageen garoonka diyaaradaha Hargeysa waxaa ka qabtay Ciidamada Booliska Somaliland.
Dad kala duwan oo ku sugan Somaliland oo aan la xiriirnay ayaa inoo xaqiijiyay xariga fanaaniintaas, iyadoo aan la ogeyn halka la geeyay, waxaana dad kala duwan oo asxaab la ah oo doonayay inay ku booqdaan xabsiga iyo saldhiga loo sheegay in aan la keenin.
Lama oga sababaha loo xiray, mana jirto war ka soo baxay Maamulka Somaliland, hase ahaatee sababta ugu weyn ee xarigooda loo aaneynayo ayaa ah safarkii ay ku yimaadeen Muqdisho iyo Bandhig faneedkii ay ku qabteen.
Guddoomiyaha Kooxda Xidigaha Geeska Abwaan Xasan Dhuxul Laab-saalax ayaa sheegay inay aad uga xun yihiin xariga loo geystay afartan Fanaan.
Abwaan Laab-Saalax ayaa sheegay in xarigooda la xiriiro tagistii Muqdisho oo ay bandhig faneedka ku qabteen, isla markaana aanu ogeyn cida ka dambeysay xarigooda.
Waxaa uu sheegay in aan loo sababeyn karin Fanaaniinta siyaasad, isla markaana meel kasta ay tagi karaan fanaaniinta sida Muqdisho iyo meelo kale.
Somaliland oo horay uga dhawaaqday inay tahay dal ka ka go’ay Soomaaliya inteeda kale ayaa waxaa ka mamnuuc ah siyaasiyiinta deegaanadooda u dhashay inay tagaan Koofurta Soomaaliya ama ka mid noqday dowladda Soomaaliya, waxaana horay u jiray siyaasiyiin loo xiray arrimahaas, balse arrinta Fanaaniinta oo aanay qabiil iyo siyaasad qeyb ka aheyn ayaa ah wax cusub.